Isifaniso engcono "Karnitona": ngezibuyekezo nezithombe
Namuhla sifuna ukuba ikutshele ukuthi ukuzulazula e Kwimakethe eyenza imithi, futhi bazikhethele esifanisweni esisenze engcono. "Karniton" - umuthi esesikhundleni spectrum ngokwanele ebanzi senzo, lapho wabelwa Ochwepheshe ezahlukene kakhulu. Lokhu ngokuyinhloko dieticians abaqeqeshi ukuqina, njengoba leli thuluzi kuyasiza ekunciphiseni mass amanoni ukwandisa ukukhuthazela ngokomzimba. Nokho, inani layo siphakeme ngokwanele, futhi kucatshangelwa umthamo wansuku zonke inkambo nyangazonke kuyabiza.
Namuhla sanquma ukuthola ukuthi yini ukuba esikhundleni "Karniton", i-analog okuyinto ethengekayo.
Ngaphambi ufune esikhundleni, udinga Qonda kahle ukuthi kuyini sikhuluma. Ngakho-ke, ake sigxile imininingwane lapha "Karniton" izidakamizwa, i-analog zazo has izakhiwo efanayo. Ngakho, ke okunezela production ezifuywayo ngesisekelo lanamuhla ethandwa L-carnitine, okuyinto likhona izidakamizwa eziningi zalezi zinsuku ngoba isisindo ukunciphisa nokuningi. Iqiniso lokuthi izidakamizwa esebenzayo is imakethwa njengendlela ukuthuthukisa ukusebenza engqondweni nasemzimbeni, ukukhuthazela, kanye ukunciphisa ukunyakazisa amalungu omzimba ngemva kokugula futhi sithuthukise umsebenzi nekutala amadoda.
Futhi konke lokhu unesibopho L-carnitine - engokwemvelo acid acid adingekayo ukuze umzimba wethu. Izindleko zalesi Bud imayelana ruble 500. Iyatholakala manje yena "Vneshtorgfarma" futhi athengiswe Pharmacy.
Indlela yokusebenzisa futhi umthamo
Sine focus kancane okwengeziwe ngendlela ukuthatha izidakamizwa "Karniton" Analogue okungase intengo ezahlukene umthamo. Kodwa izinto zokuqala kuqala. Umuthi itholakala amafomu amabili umthamo. Kuyinto tablet futhi amathonsi. Nokho, Ungakhetha oyikhethayo, ikhambi kusivumela ukuba asondele umthamo nezimo xaxa. I yokusetshenziswa ngokuvamile ecacisiwe iziqondiso jikelele yokwamukela, okungukuthi omunye ithebhulethi kanye ngosuku. Eqinisweni, ngezinye imithwalo eliphezulu ezemidlalo, uma umgomo ilimala ukunciphisa isisindo, umthamo luyanda amaphilisi eziyisishiyagalombili ngosuku. Into esemqoka - khumbula ukuthi njalo ukuthatha imithi akukwazi, ngoba umzimba uzoma amunca acid acid esuka ukudla abavamile. Ngakho-ke, ukuthatha ngenyanga bese ukuthatha ikhefu.
I analogue bokuqala yayingase ibizwe ngokuthi ukudla ezivamile. L-carnitine eziqukethwe unogwaja kanye yenkomo, inkukhu, isibindi nezinso. Ngakho ukudla inyama nsuku zonke, ngeke zihlupheka ngenxa yokuntuleka le acid acid. Kodwa inyama noma abantu ahlale edla ukudla okuqinile deku L-carnitine, kukhona amalungiselelo akhethekile.
Sesikubonile kakade i okufakiwe ezifana "Karniton". Analogs eshibhile Yebo, kukhona, ngakho ake abalethe ukunakwa kwakho.
Lesi sidakamizwa isetshenziswa ukuqina abaqeqeshi kanye odokotela ezihlukahlukene specialisation. engavamile yayo itholakala iqiniso ukuthi isixazululo umjovo. Isetshenziselwa esimweni ekwelapheni ukukhuluphala nangaphansi imithwalo okusezingeni eliphezulu, lapho umzimba udinga usizo olwengeziwe. Kulokhu, umthelela izidakamizwa luphakanyiswa ngenxa yokuthi lungena igazi ngokusebenzisa izicubu imisipha, ngokudlula esiswini. Wenziwe e-Italy, okuyinto kuholela ukuthemba okukhulu ngekhwalithi. Olunye uhlobo, inqobo nje uma umenzi, - ithebhulethi chewable ukuthi angabelwa ngisho nezingane. Izindleko iphakethe-10 vials - ruble 1200. Ingabe Sifana nenani yephakethe amaphilisi ukuhlafuna (10 nama-PC. Per ibhamuza).
Yebo, eziningi ubusuvele ngaphawula intengo kunalokho okusezingeni eliphezulu ukuthi isimo ekhemisi amaketanga egumbini izidakamizwa "Karniton". Analogs, esikhundleni zomuthi kungaba ngokuphawulekayo londoloza. Kodwana izindlela ezingabizi kakhulu we "carnitine chloride", okuyinto kuveza FSI "Russian nezenhliziyo Ucwaningo Production Inxanxathela" iHhovisi lezeMpilo Russia - ukukhiqizwa kokulinganisa imikhiqizo yezokwelapha futhi yemvelo. Ulwazi mayelana lokhu, kwi isembozo. Ibid Setha ukuhlanekezela nekheli umkhiqizi, lapho ungaxhumana kuye sizwakalise zonke izimangalo.
Kulesi sici, konke okulungile. Okusho ukuthi, uma ungeke ukwazi ukuthenga "Karniton" yasekuqaleni - analogue izipesheli ezishibhile. Izindleko zokufaka kuyinto ruble 190 kuphela. Kulokhu, lesi sidakamizwa isidlulile ukulawula izinga futhi livunyelwe ukuqaliswa Pharmacy, a ekwakhiweni emisha yasebenza sokugcwaliseka kwaso. He is ngaphakathi amaphilisi futhi izitsha eziyisikhombisa ngoba umjovo. izindleko yesibili ruble 250 (500 mg isithako esisebenzayo ampoule ngalinye).
Eqinisweni, isithako esebenzayo kuzo zonke lezi izidakamizwa ayafana ngokuphelele. Nokho, umuntu ekhetha ukhetho ezifanele kakhulu. Ngaphansi kwaleli gama ukuhweba emashalofini Pharmacy ungathola i okufakiwe abakhiqizi okungenani ezine ezihlukene. Uma ucabangela "Karniton" futhi analogue yayo, kufanele akutshele mayelana abaningi babo, ukuze umfundi isungule ophelele kakhulu.
Kukhona ukudayiswa "ka-L carnitine" kamakhi "Corporation Olifen". Le isixazululo 20% e umfuma 50 ml. Izindleko lamukeleke ngempela - ruble 270 kuphela, kuyilapho ngesikhathi zonke esidlweni, uzodinga 1.5 ml izidakamizwa. Umhlahlandlela uncoma ukuyisebenzisa kanye ngosuku, kodwa uma imithwalo inzima ejimini usebenzisa imithamo ephezudlwana.
«L-carnitine 500 mg"
Lokhu amaphilisi aqukethe esebenzayo isithako L-carnitine, kanye amavithamini iqembu B, ukuhlinzeka abatholako evamile zomuthi. Akukhona nje "Karniton" Ukudla kuyindlela ephumelelayo. Ngamunye the Izithako zokudla ezichazwe kulesi sihloko ingasetshenziswa ne kusebenta efanayo. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe izidakamizwa «L-carnitine" kuyinto ruble 545 ngoba amaphilisi 60. Khumbula ukuthi ukuphuza imithi inyanga ezingaphezu kweyodwa is hhayi Kunconywa. Qiniseka ukugcina lo mthetho, ngaphandle kwalokho umzimba ongakufunda ngokwakho bahlukane nakho lokhu acid acid.
Xoxa imfanelo yakho Umqeqeshi noma okunomsoco, kungase sithathe ibhekwa ngawe, ungcono "Karniton". Analogs, ukubuyekezwa okuyizinto iyamangalisa ngempela, ingabonwa athikili yethu. Ikakhulukazi, "Solgar L-carnitine" - umkhiqizo inhlanganisela equkethe hhayi kuphela isithako kodwa futhi i-calcium. Izindleko ke impela high - ruble mayelana 2000 amaphilisi 30.
Sishilo kakade ukuthi kukhona "Karniton" isixazululo Pharmacy. Analogue "Elkar" - izidakamizwa ngokuphelele ezifanayo, Nokho, okuyinto, isebenzisa ethandwa kakhulu. intengo yayo iqala ruble 316. Cishe, lena isici ukuthi inquma ukuthandwa leli thuluzi.
I samanje nomuthi Ukwakheka levocarnitine, ethuthukisa amaprotheni namafutha umzimba, futhi sithuthukisa uketshezi of wokugaya ukudla juice enzyme umsebenzi kunciphisa ukhuluphele futhi kunciphisa inani fat in the imisipha.
Nezithasiselo equkethe L-carnitine, zidayiswa Pharmacy phezu-ulele amanani, ngakho ngaphambi kokuba iphendukele usizo lwabo, buza umfundisi ukuqina, kungakhathaliseki ukukwenza. Ochwepheshe ingayala imikhiqizo efanayo, ogama value kuyinto ephansi kakhulu. Basitshela ukuthi ezemidlalo umsoco. Lokhu «L-Carnitine L-Tartrate» by Betancourt Nutrition, kanye «L-Carnitine L-Tartrate» by AI Ezemidlalo Nutrition. Basuke okuthengiswa okukhethekile ezitolo noma isisindo amabhange enkulu, futhi intengo zabo esihamba ngawo ngokuphindwe izikhathi 4 aphansi.
Izibuyekezo izazi zokudla mayelana izidakamizwa "Karniton"
L-carnitine, L-carnitine - ikhemikhali kusisiza ulahlekelwe isisindo. Lokhu kungenxa amafutha nokushisa kwalo izakhiwo. Noma kunjalo, cishe engenamsebenzi kulabo abantu abangekho indlela yokwenziwa wokuphila, futhi ngenxa yalokho ngokuphelele asihambisani "neminye besifazane." Kodwa abadlali amatasa ukuqeqeshwa amandla, kunalokho, kahle aphendule imikhiqizo enjalo.
Ngakho, le Vitamin-like izinto, okuyizinto kalula ukusiza balahle Kilos owengeziwe owodwa ngenyanga, kodwa kuphela uma umsebenzi. Izidakamizwa ukwandisa ukukhuthazela umzimba ngaphansi indlela yokudla ehambisana nempilo nokhahlo, lapho ubuthakathaka enqanda bahlanganyele ngokugcwele kwezemidlalo.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi kuyinto engenakwenzeka ukuba njalo Izithako zokudla ngoba umzimba kalula ukhohlwe indlela synthesize carnitine endogenous. Ngakho-ke, ikhefu phakathi izifundo kufanele kube hhayi ngaphansi kwezinsuku ezingu-30.
Tablets noma isixazululo
Lena inkinga yokugcina ngingathanda ukuxoxa. Ayikho umehluko simiso, nakuba ikhambi liqala ukwenza izinto ngokushesha kunokuba amaphilisi. Yingakho ukusebenzisa kwayo ubhekwa elula kakhudlwana. Ngesikhathi esifanayo, khumbula ukuthi Kunconywa Isikali imiyalelo (1 tablet ngelanga) akukuniki lutho. Ukuze sithole umphumela, udinga ukuthatha amaphilisi okungenani 8 ngosuku, okungukuthi ngenyanga uzoba ukuchitha ruble 3000.
Ingabe kunengqondo ukuba uchithe leli nani ukuqeda amakhilogremu extra ngenyanga - kukuwe. A engcono kungaba izidakamizwa nge "carnitine" kwezemidlalo umsoco khulula. Ezitolo ezikhethekile ungakwazi ukuthenga umkhiqizo ne nezinzuzo ezingokoqobo. Ikhwalithi amaphilisi kuyinto ezingeni eliphezulu kakhulu.
Izidakamizwa "Lerivon". imiyalelo ukusetshenziswa kwaso.
Izidakamizwa "uro-Vaks": ukubuyekezwa, imiyalelo
Lokhu Golden Umsuka emangalisayo
Indlela vimbela ophahleni lokhuni endlini? ukwahlukanisa Ofanele ophahleni yamapulangwe endlini yangasese
Izindwangu Curtain - izinhlobo, incazelo, ukukhethwa
I-Oka ingenye yezinhlobonhlobo ezinkulu ze-Volga. Uphi umthombo womfula? Oka kanye nezikhangayo zayo eziyinhloko
Okukhulu Kuznetsov Mikhail Borisovich
Kanjani ukusheshisa umzimba futhi ulahlekelwe isisindo: zonke izinto zingenzeka. Into esemqoka - ngendlela enengqondo
Linn Berggren, ilungu wangaphambilini we band Ace Of Base: Biography, empilweni yakho
Nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu Oriental kanye nezici zayo: Tiger Tiger nowesifazane indoda - kwedivayisi iyatholakala?